Zeevou | I-PMS yokuphumelela amabhaso, uManejala weShaneli kunye neNjini yokubhukisha
Amakhonkco eGoogle aSimahla okuBhukisha
Oxhumana nabo beGoogle
I-PMS kunye noManejala weSiteshi
I-Zeevou yiNkqubo yoLawulo lwePropati kunye noManejala weSitishi ohambisa ngokuzenzekelayo zonke iindawo zeshishini lakho lokuqeshisa elifutshane, elungiselela iinkqubo kunye nokunciphisa impazamo yomntu.
Iimpawu eziya kuguqula ishishini lakho kube kanye
Indawo ye-PMS yeZeevou ikuvumela ukuba ulawule zonke iipropathi zakho kwindawo enye yokungena.
Qinisekisa ukuba amakhalane abhukishe onke amabhokisi, nokuba avela phi.
Lawula konke ukungena kwakho -i-keysafes, ii-smart locks, okanye i-KeyNest- ngeZeevou
Khuthaza ukubhukisha kwakho ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yethu ye-SEO-friendly edityaniswe nezixhobo eziphezulu zokuhlalutya.
Cofa amaxabiso akho kunye nokufumaneka ngexesha lokwenyani ngaphezulu kwamajelo angama-200 ngonxibelelwano lwethu olunamandla lweendlela ezimbini ze-API.
Vumela abagcini-ndlu bakho ukuba bafikelele ngokulula kulwazi ngelixa besendleleni kwaye bancede ukulawula ukurenta kwakho.
Yiba nesishwankathelo esifanelekileyo sokusebenza kweshishini lakho nangaliphi na ixesha- nokuba yimali, ukuhlala okanye ukusebenza.
Lawula lonke unxibelelwano (ii-imeyile kunye neeSMS) zeendwendwe kunye nabasebenzi abasuka kwindawo enye kwaye ugcine umkhondo wayo yonke into.
Fikelela kwi-CRM yeendwendwe eyakhelwe-ngaphakathi ehambisa ingqokelela yedilesi ye-imeyile kunye nokwakha isiseko sedatha ehambelana ne-GDPR ngaphandle kokuphakamisa umnwe.
Ngokuzenzekelayo ulawulo lwakho lokucoca-nokuba kubasebenzi abasebenza ezindlwini okanye ngokwenza ikhontrakthi kwinkampani yokucoca yangaphandle.
UZeevou uvumela abatyali mali kunye nabanini mhlaba abasebenza neenkampani zolawulo lokurenta iholide ukujonga umvuzo wabo ngexesha lokwenyani.
I-Zeevou ikuvumela ukuba ugcine ngokulula kuyo yonke imiba yolondolozo kwaye ujonge inkqubela phambili yabo ukusuka ku-A ukuya ku-Z.
Sikunika iNkxaso yeNkulumbuso kuba siyazi kakuhle ukuba impumelelo yethu ixhomekeke kweyakho.
I-Zeevou yenza ukuba ukwazi ukuzenzekelayo ukubala inzuzo kunye nabanikazi obalawulayo.
Zisa amava olundwendwe oluhle ngeZeevou kwaye ubukele ishishini lakho likhula ukusuka emandleni ukuya emandleni!
Lawula yonke imisebenzi yakho esembindini, kwaye uzenzele indawo enkulu yemisebenzi yemihla ngemihla yolawulo.
I-Zeevou ikuvumela ukuba usete ngokulula amaxabiso ngobuninzi beepropathi ezininzi okanye amaxabiso okutyhala usebenzisa izixhobo ezinamaxabiso anamandla.
Sebenzisa eli nqaku lilodwa ukulawula ukurenta kwakho ebusuku, ngeveki, nangenyanga zonke ukusuka kwindawo enye yokungena.
Amanqaku amatsha akhutshwa rhoqo ngenyanga, njengoko sizimisele ukubekwa phambili ekubumbeni ishishini.
Ngokuzenzekelayo iinkqubo zakho
kwaye Hlala emva
I-Zeevou idityaniswa namahlakani awahlukeneyo ukwenza ukuba ukwazi ukuzenzekelayo kuyo yonke imiba yeshishini lakho lokubuka iindwendwe ukusuka kumaxabiso, ukuvavanywa kweendwendwe, unxibelelwano kunye nokuphendula.
Yintoni eyenza sahluke?
Iqela lethu eZeevou liphuhlise uninzi lweempawu ezizodwa, ngokusekwe kwingxelo evela kubasebenzisi bethu eyenza imveliso ikwazi ukuhlangabezana neemfuno zobomi bokwenyani. Siyakholelwa kwizinto ezintsha, ukusebenza kakuhle, kunye nokukhula. Siphuhlisa, siguquka kwaye senza izinto ngendlela eyahlukileyo. Ukufumanisa ukuba yintoni eyahlulahlula kukhuphiswano, cofa iqhosha elingezantsi.
Yandisa Ufikeleleko Lakho
ngokudibanisa kumajelo angama-200 +
Gcwalisa ubusuku bakho obungenanto ngokudwelisa indawo yakho yokurenta kumajelo amaninzi ngelixa uphepha ukubhukisha ngaphezulu. Hambisa amaxabiso akho kunye nokufumaneka konqakrazo olumbalwa ngaphezulu kwamajelo amaqabane angama-200 ngeZeevou's enamandla, ixesha lokwenyani, indlela yokunxibelelana ye-API.
Ukuzenzekelayo yile nto sigqwesa kuyo! Qala ngokulayisha iipropathi zakho kwiZeevou, setha amaxabiso akho, ukubakho, kunye nokutsala amajelo. Gcina ixesha lomlawuli kwaye ulityale ekukhuleni. Emva koko hlala phantsi, uphumle, kwaye wonwabe!
Ukulungele ukukhula kunye nokulinganisa ishishini lakho? Vumela uZeevou enze imisebenzi yakho yesiqhelo kunye neenkqubo. Ujolise nje ekwandiseni inzuzo yakho. Masenze ukuphakamisa okunzima kuwe. Ukulula okunjalo!
UZeevou akayena nje i-PMS kunye nomphathi wesiteshi. Simalunga nokunciphisa ukuxhomekeka kwakho kwii-OTA. Masidibanise imikhosi, siphazamise ishishini kwaye siqonde uQinisekiso lokuBhukisha ngqo! Ithuba elinjalo!
Joyina iQonga lethu lokuBhukisha ngokuSimahla
Dwelisa iipropathi zakho kwiZeevou ngqo kwaye ubukele imali eyiyo efanelekileyo ekubhukeni ngokuthe ngqo okungena ezipokothweni zakho. Ngaba uyazi ukuba uninzi lwamaqonga okubhukisha abiza i-15-25% kwimirhumo? NgeZeevou ngqo, bobabini ababuki zindwendwe kunye neendwendwe bafumana izivumelwano ezingcono njengoko kungekho mntu wesithathu ugcina ukusikwa. Kwaye akukho lwazi lundwendwe kunye nolundwendwe olubanjiweyo, ke uya kuba nonxibelelwano olukhawulezileyo noluthe ngqo. Bhalisela simahla ngoku kwaye usincede siqonde iNguqulelo yokubhukisha ngqo! Akukho Mitya encanyathiselwe!
Ixabiso-mali-mali kumaPhakheji amaxabiso kuzo zonke iiMfuno
Akukho khomishini, akukho maphakathi, akukho ntlawulo ifihliweyo!
Amathuba abaxhasi awapheli. Vulela amandla kaZeevou apheleleyo ngokubhalisela kwizicwangciso zethu zenyanga okanye zonyaka kwaye ushiye konke kuthi. Fikelela kuko konke okubonelelwa yi-PMS kaZeevou, umphathi wesitishi, kunye nenjini yokubhukisha. Nandipha amalungelo angenamda kwaye uphumle.
Fumana i-SEO-friendly, i-website yokubhuka ngokuthe ngqo kwaye udwelise iirenti zakho kwiqonga lethu lokubhuka elingenakhomishini, iZeevou Direct. Yenza ngokuqhubekekayo ukubhukisha kwakho ngokuthe ngqo. Joyina imikhosi namhlanje kwaye uncede uthungelwano lwabaSebenzi bamaQabane ukuba sandise ukufikelela kwethu!
Ilizwi kubaThengi boNyaka
Iiyunithi ezininzi onazo, kokuncinci kuya kufuneka uhlawule ngeyunithi nganye.
Umvangeli okanye umxhasi?
Oko Kuthethwa Ngiqabane Lethu
Okokuqala, ndicinga ukuba iinkonzo kunye nokukunceda ukuba ufumane okuvela eZeevou kuyinto emnandi kakhulu. Iiseshoni zokubhoda, ngqo kwi-WhatsApp yokunxibelelana nomqeqeshi wakho, umthunywa we-Facebook kunye nengxoxo ekwi-Intanethi kwisiza seZeevou. Awunakho ukubuza ngaphezulu. Njengayo nayiphi na enye into, kuthatha amaxesha ambalwa ukwenza into de uyiqhele kwaye ngoku ndiyifumana ngoku ndingahamba ngeZeevou ngaphandle kokufuna amanqaku oncedo kunye nee-FAQ ezizizixhobo ezimangalisayo zokuzisebenzisa ukuba ufuna ukuzama izinto kwi yakho ungumnikazi kwaye uzifundise. Inayo yonke into oyifunayo kwiikhowudi eziphambili, iishedyuli zokucoca, ii-imeyile ezizenzekelayo nokunye okuninzi kwaye ndonwabile ukuba ndifumene uZeevou kwaye ndenza uphando lwam ngaphambi kokuhamba nomnye umntu.
Indawo yokuhlala eyimbali yokuLungiselela uLTD
Sisebenzise uZeevou kangangeeveki ezimbalwa kwaye isibonelelo esivelileyo kum kukuba siyinkonzo. Ukukwazi ukubhukisha umboniso weyure epheleleyo yayisisiqalo esihle kuhambo lwam lweZeevou olwalulandelwa yiseshoni yokubhabha iyure ye-1.5 kwaye ndiyakwazi ukuthumela umyalezo wonxibelelwano lwam eZeevou nanini na ndithanda. Ukuba mtsha kumzi mveliso weenkonzo zokuhlala kwakusoyikisa kwaye iZeevou ayiloqonga elilula lokufumanisa, kodwa umbono omde wenkampani odityaniswe nenkonzo yabathengi kuthetha ukuba ndiyazi ukuba ndiyifumana imali yam!
Isisombululo sePropati yoGreen
Ndingatsho ngokunyaniseka konke ukuba uZeevou ubutshintshile ubomi bam! Emva kokufumana abaphathi beziteshi ezi-5 kwishishini lam lokuHlala eliSetyenzisiweyo ukuza kuthi ga ngoku, ekugqibeleni ndiyifumene indawo efanelekileyo kwishishini lethu. Ngokucacileyo, uZeevou wenza izinto zilula kakhulu! Kuyakhawuleza, kulula ukuyisebenzisa. Ukusukela ukujoyina uZeevou bendinexesha elininzi lokugxila kwishishini lam kunokuba ndibekhona! Njengeshishini loMzantsi Afrika silixhasa ngokupheleleyo iphulo elithe ngqo lencwadi. UZeevou uyakunceda wenze oku. Inkxaso ekhoyo iyamangalisa, ukuba ndibuza umbuzo kwiqela labasebenzisi be-Facebook ndinempendulo kwimizuzu. UZeevou sisipho somboneleli oxakekileyo wokuHlala. Enkosi!
Ndiqale ngeeyunithi ezingama-zero kodwa bendifuna ukuhamba malunga nezinto ngokungathi ndine-100 yokuqinisekisa ukuba ndinokukwazi ukukala ngokukhawuleza nangempumelelo. UZeevou akakuphosanga ukubetha ngokubhekisele kulawulo lwesitishi kwaye wenza uguquko oluthe ngqo ngokuthe ngqo, enkosi kubo sifumene ukubhukisha nge- £ 10K kubusuku obu-3 bokuhlala nge-Airbnb. Inkqubela phambili kunye nophuculo zihlala zihleli kwaye zithatha ingxelo kakuhle kwaye zizalisekise utshintsho endicebise ukuba loluphi uhlobo lokujonga. Nditsho nomphathi ngokwakhe akanangxaki nokujonga xa ndibambekile. Ingcezu enkulu yekiti kwaye iya kumangalisa kunyaka okanye emibini. Joyina uguquko…
UZeevou uncede iCliftonvalley Apartments isikali ukusuka kwiiyunithi ezi-3 ukuya kwezi-15. IZeevou sisixhobo esihle esivumela ukuba silawule ngokufanelekileyo ukubhukisha kwethu, iindwendwe, abatyali mali kunye nemali. Ukudityaniswa kwe-Signable, Xero kunye ne-Stripe kube luncedo kakhulu kwaye kunciphise umthwalo wethu, kusivumela ukuba sigxile kwezinye iindawo zeshishini. I-Zeevou iyaqhubeka nokuphucuka ngokuhamba kwexesha kwaye ngokukhawuleza iba yindawo yokuthengisa yonke indawo kuyo yonke imiba yeshishini lethu lokuHanjiswa kweNkonzo. UZeevou unomdla wokumamela kunye nokuziqhelanisa nemveliso ukuze ilingane ngakumbi iimfuno zabasebenzisi bayo. Sijonge phambili ekuzameni amanqaku amatsha okwangoku kwimephu yendlela ebanzi.
Ezinye zeMpumelelo zethu
"Nangona ilizwe lizele kukubandezeleka, likwanokoyiswa kwalo." UHelen Keller
Twitter Facebook LinkedIn Whatsapp Instagram Twilley Ingxoxo
UZeevou uphumelela amabhaso angundoqo eVRMB's Keystone 2021